अंग्रेजीमा फलहरूको यस पाठमा हामी अंग्रेजीमा फलफूलको नाम, अंग्रेजीमा हिज्जे र फलहरूको अंग्रेजी र अंग्रेजी फलहरूको नमूना वाक्यहरू बनाउन सिक्नेछौं।
हामीले तपाईंको लागि तल उत्तम दृश्यहरू तयार गरेका छौं। चित्रहरु सहित अंग्रेजी सिक्न सजिलो छ। तपाईं सजिलैसँग अंग्रेजीमा फलफूलको विषय सिक्न सक्नुहुनेछ हाम्रो स्वादिष्ट र रमाइलो भिजुअलहरूको साथ। यहाँ हाम्रा प्रभुले हामीलाई दिनुभएका उत्कृष्ट आशिष्‌हरू छन्। पहिले अ fruits्ग्रेजी फल इलस्ट्रेटेड स्पष्टीकरणमा हेर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईं अंग्रेजी फलहरू सूचीमा तिनीहरूको टर्की बराबरको साथ देख्नुहुनेछ। तपाईं हाम्रो पृष्ठको तल स्क्रोल गर्दा अंग्रेजीमा फलहरूको बारेमा बढि जान्नुहोस्।
अंग्रेजी फल (चित्र सहित)
TR: अनानास EN: अनानास
TR: Grape EN: अंगूर
TR: पीच EN: पीच
TR: सुन्तला EN: सुन्तला
TR: केला TR: केरा
TR: ट्यान्जाइन EN: ट्यान्जाइन
TR: लिमन EN: लेमन
TR: चित्र EN: छवि
TR: तरबूज EN: तरबूज
TR: खुबानी EN: खुबानी
TR: Kiraz EN: चेरी
TR: किवी EN: किवी
TR: नरिवल EN: नरिवल
TR: अंगूर EN: अंगूर
TR: एरिक EN: बेर
TR: स्ट्रबेरी शीर्ष: स्ट्रबेरी
TR: ब्ल्याकबेरी शीर्ष: ब्ल्याकबेरी
TR: PEE EN: PEAR
अ Common्ग्रेजीमा सब भन्दा साधारण फल नामहरू
सबै भाषाहरू जस्तै, फल नामहरू अंग्रेजीमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यद्यपि यी मध्ये केहि अरू भन्दा धेरै देखापर्दछ। यिनीहरूलाई तल देखाइएको छ;
यो सिफारिश गरिन्छ कि तपाईंले तिनीहरूलाई काम गरेको बेलामा याद राख्नुहोस्, तिनीहरूलाई कण्ठ गर्नुहुन्न। किनभने कण्ठ गरेको कारण स्वाभाविक रूपले तपाइँलाई बिर्सिन सक्छ, यदि तपाइँ यसलाई केहि समय पछि दोहोर्याउँनु भएन भने। यसैले, सम्पूर्ण प्रक्रिया हराउने छ, र समय बर्बाद हुनेछ।
त्यसो भए, यी शब्दहरूको टर्की बराबर के हो र तिनीहरूको उच्चारणहरू कसरी छन्?
अंग्रेजीमा फल नामहरू र उच्चारण
उच्चारणको विषय एक ठूलो समस्या हो, विशेष गरी विद्यार्थीहरू र जो अंग्रेजीमा नयाँ छन्। यसको एक कारण यो छ कि यस मुद्दालाई ध्यान दिएन। यद्यपि, एक गलत उच्चारणको केहि केसहरूमा फरक अर्थ हुन सक्छ।
माथि सूचीबद्ध अंग्रेजीमा फलहरूको समकक्षता र ती कसरी घोषणा गरिन्छ तल तालिकामा हुन्।
फलफूल टर्की नामहरू उच्चारण
एप्पल स्याउ Epil
Apricot खुबानी एप्रिकिट
अवाकाडो एभोकैडो एभोकैडो
केरा केले भवन
ब्ल्याकबेरी ब्ल्याकबेरी रिस्टब्यान्ड
ब्लुबेरी ब्लूबेरीहरू ब्लुबेरि
चेरी चेरी Çery
नरिवल भारतीय नारियल नरिवल
नेभाराको नेभारा नेभाराको
अंगूर अंगूर ग्रेप
ग्रेपफ्रुट अंगुर दाख Greypfuriyt
लेमन लिमोन लेमन
लेम लाइम लेम
मन्डारिन मन्डारिन ओसिलो
आम आम मेनगो
खरबुजा खरबुजा मेलोन
चित्रकारी Nectarine नेक्ट्रिन
सुन्तला सुन्तला Orinc
मेवा मेवा Pepaya
आवेग फलफूल जुनून फल अग्रिम फुर्याइट
पीच आडू हरामी
नासपाती नाशपाती पियर
अनानास भुईँकटर पेनेपिल
आलुबखडा एरिक पिलम
दारिम दारिम Pomegarranite
क्विन्ज quince कुइन्स
रास्पबेरी ऐंसेलु रज्बेरी
स्ट्रबेरी स्ट्रबेरी सित्रोबार
तरबूज खरबुजा वोट्रेमेल
तालिका I: अंग्रेजीमा फलहरू, उनीहरूको टर्कीश र तिनीहरूको उच्चारण
तिनीहरूलाई सिक्नाले तपाईंको शब्दावली सुधार गर्नेछ र तपाईंलाई भाषा अधिक सक्रिय रूपमा प्रयोग गर्न सक्षम गर्दछ।
अ learning्ग्रेजी सिक्दै गर्दा व्याकरणको ज्ञानका साथै शब्दावली पनि महत्त्वपूर्ण छ। अस्खलित अंग्रेजी बोल्नको लागि उच्च शब्दावली हुनु आवश्यक छ। यो लेखमा, तपाई अंग्रेजीमा फल नामहरूको अर्थ र तपाईको दैनिक कुराकानीमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारे पढ्न सक्नुहुन्छ।
अंग्रेजी फल शब्दावली सूची तपाईले बढि प्रयोग गरिएको फलहरुको अर्थ देख्न सक्नुहुन्छ। यी शब्दहरू अक्सर पढ्न याद गर्नुहोस्, दुबै लेखेर र बोलेर, सही उच्चारणलाई पूर्ण रूपमा अँगाल्न। प्रत्येक शब्द ठूलो स्वरले बोलेको अभ्यासले तपाईंलाई अ English्ग्रेजी सजीलै सिक्न मद्दत गर्दछ।
सामान्य गल्तीबाट सुरू गरौं। वनस्पति विज्ञानमा फलफूल र तरकारीका रूपमा बिरुवाहरूको वर्गीकरण धेरै मानिसहरूलाई गलत रूपमा थाहा हुन्छ। फलफूल र तरकारीहरू तिनीहरू आउने बोटको भागको हिसाबले वर्गीकृत गरिन्छ। फलमा बीज छ जुन त्यसको फूल फुल्ने बोटबाट आउँदछ। तरकारीहरू बोटको जरा, बल्ब, पात र डाँठबाट आउँछन्। हामी प्राय: यी मध्ये केही फलहरू "तरकारीहरू" को रूपमा वर्णन गर्दछौं (उदाहरणका लागि टमाटर, एवोकैडो, एग्प्लान्ट) तर यी वास्तवमै फल हुन्।
यसको ब्यापारिक मूल्य छ किनकि यसलाई फलफूल, जाम र मुरब्बा जस्ता तयार खानामा पनि प्रयोग गरिन्छ। वास्तवमा, सबै फलहरू खाद्य हुँदैनन्। यस पृष्ठमा, तपाइँ तिनीहरूको भित्री अर्थको साथ सामान्य भान्छा फलहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
अंग्रेजीमा फलहरू सिक्दै
तपाइँ आउने प्रत्येक नयाँ शब्द अभ्यास गर्न निश्चित गर्नुहोस्। यी प्रश्नहरूको उत्तर दिन प्रयास गर्नुहोस्, विशेष गरी तपाईंको दैनिक जीवनको बारेमा अ English्ग्रेजीमा।
यी मध्ये कुन तपाईंको मनपर्ने हो?
के तपाईं बस्नुहुन्छ जहाँ ताजा फल किन्न सजिलो छ?
तपाईंले कुन फलफूलको प्रयोग गर्नुभएको छैन?
अभ्यासको लागि कागजको एउटा टुक्रा निकाल्नुहोस् र यस शब्दावलीलाई सुधार गर्न केही अनुच्छेदहरू लेख्नुहोस् (यसले तपाईंलाई शब्दहरू सजिलैसँग सम्झन मद्दत गर्दछ)। तपाईं आफैं वा साथीसँग ठूलो स्वरले बोलेको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ।
अंग्रेजी वाक्य उदाहरणमा फलहरू
यो केरा हो।
यी खरबूजेहरू हुन्।
यो एक किवी हो।
टोकरीमा चार संतरेहरू छन्।
मलाई स्याउ मन पर्छ
मलाई आम मनपर्दैन।
उसलाई कागती मन पर्दैन।
टन्जेरीन एक सिट्रस फल हो।
तपाईंले हरेक दिन फल खानु पर्छ।
मैले एक किलो स्याउ किनें।
मलाई सुक्खा फल मन पर्छ।
उनलाई ताजा फल खान मन पर्छ।
Sally फल फलों को रस मन पर्छ।
यो फलको राम्रो गन्ध छ।
बगैंचामा फलफूलका रूखहरू छन्।
तरबूज गर्मीको फल हो।
पहिले, माथिका वाक्यहरू आफैंलाई टर्कीमा अनुवाद गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। तल तपाईंको गल्तीहरू जाँच गर्न जाँच गर्नुहोस्। यी अ fruits्ग्रेजी फलहरूको बारेमा वाक्यहरूको अर्थ तल छन्।
मलाई स्याउ मन पर्छ।
मलाई आम मन पर्दैन।
उसलाई नींबू मन पर्दैन।
तपाईंले दिनहुँ फल खानुहुन्छ।
उसलाई ताजा फल खान मन पर्छ।
बगैंचामा धेरै फल रूखहरू छन्।
अंग्रेजी प्रश्नमा फलहरू
यो के हो? - यो सुन्तला रंग हो।
के तपाईंलाई रानी मन पर्छ? - हो, मलाई टाउको मन पर्छ।
के एमा खुबानी मन पर्छ? - हो, उसलाई खुबानी मन पर्छ।
केहि फल चाहानुहुन्छ? - हो, कृपया
तपाई कुन फल अधिक मन पराउनुहुन्छ? - मलाई सुन्तला सबैभन्दा मन पर्छ।
तपाईं एक avocado छीलो? - हो, म गर्छु।
तपाईको मनपर्ने फल के हो? - मेरो मनपर्ने फल चेरी हो।
एक किलो स्ट्रबेरी कति छ?
संसारमा नरिवल कहाँ हुन्छ?
तपाईं कसरी अनानास खानुहुन्छ?
केहि फल चाहानुहुन्छ? - हो, कृपया।
तपाईलाई कुन फल मन पर्छ? - मलाई सुन्तला सबैभन्दा मन पर्छ।
तपाईं एक avocado छील गर्न सक्नुहुन्छ? - हो, म गर्नेछु।
अंग्रेजीमा फलफूल नमूना पाठ
फलहरु हाम्रो स्वास्थ्य को लागी राम्रो हो। सबैलाई आनी खानु पर्छ। यसका धेरै कारणहरू छन्। पहिले, तपाईंले तिनीहरूलाई पकाउन आवश्यक पर्दैन। दोस्रो, यो फेला पार्न धेरै सजिलो छ। तेस्रो, तिनीहरूसँग फाइबर छ जुन पाचनको लागि धेरै राम्रो छ। थप रूपमा, फलहरू कम क्यालोरी हुन्छन्। त्यसोभए तपाईले तौल प्राप्त गर्नुहुन्न। यसबाहेक फलफूलले हृदय रोग र क्यान्सर जस्ता केही रोगहरूलाई रोक्दछ। यी बाहेक, फलहरुमा भिटामिन र खनिज हुन्छ। अन्तमा, फलहरूसँग धेरै स्वाद र गन्ध हुन्छ। तपाइँसँग खाना खाने बानीमा फलहरू समावेश गर्ने धेरै कारणहरू छन्।
मनपर्‍यो / मनपर्दैन
जब हामी भन्छौं कि हामीलाई फलहरू मनपर्दछ कि हुँदैन, हामी मनपराएका फलहरूको लागि "लाइक" भन्ने शव्द प्रयोग गर्दछौं र नचाहिनेहरूको लागि "मनपर्दैन"।
यस विषयमा नमूना वाक्यहरू;
I जस्तै स्याउ / चन्द्र तरल / मलाई मन पर्छ / स्याउ माया।
तपाईं जस्तै क्विन्ज / यू कुइन्सलाई जस्तै / तपाईंलाई मनपर्दछ / प्रेम टुक्को छ।
We जस्तै स्ट्रबेरी / वाई साइट्रोबर / हामी मनपर्दछ / हामी स्ट्रबेरी मन पराउछौं।
तपाईं जस्तै चेरी / मिठो चेरी / तपाईंलाई मनपर्दछ / तपाईंलाई चेरी मनपर्दछ।
He जस्तै केरा / नमस्ते bınena / उसलाई केरा मनपर्दछ / मन पर्छ।
त्यो जस्तै सुन्तला / शि लाइक orınc / उसलाई सुन्तला मनपर्दछ / मनपर्दछ।
तिनीहरू जस्तै खरबूजा / Deylik malın / तिनीहरू मन पराउँछन् / प्रेम तरबूज।
अब नकारात्मक वाक्यको उदाहरण दिनुहोस्:
I मनपर्दैन एप्पल / मलाई स्याउ मनपर्दैन।
We मनपर्दैन हामी टुहुरो / क्विन्ज मनपर्दैन।
He मनपर्दैन प्लम / उसलाई बेर मन पर्दैन।
तिनीहरू मनपर्दैन बलर / उनीहरू खरबूज मन पराउँदैनन्।
तपाईं मनपर्दैन नाशपाती / तपाईं नाशपाती मन पराउनुहुन्न।
प्राथमिक शिक्षाको लागि अंग्रेजी फलहरू
एलिमेन्टरी स्कूलका विद्यार्थीहरूका लागि उनीहरू अंग्रेजीमा फलफूलको विषय सिक्छन्। फलफूलका नामहरू सिक्न बच्चाहरूको लागि धेरै रमाईलो हुन सक्छ, यहाँ तपाईं अंग्रेजीमा फलफूलहरूको नाम फेला पार्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईं आफ्ना साना बच्चाहरूसँग अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ।
विशेष गरी प्रारम्भिक र पूर्वस्कूली बच्चाहरूको लागि, अ learning्ग्रेजी सिक्न गीत र भिडियोहरूको साथ सजिलो हुन सक्छ। यहाँ रमाईलो र सरल छ अंग्रेजी फल गीत गीत हामी साझा गर्नेछौं। तपाईं आफ्ना विद्यार्थीहरू वा तपाईंको बच्चासँग यो गीत गाउन सक्नुहुन्छ ताकि उनीहरू अभ्यास गर्न सक्दछन्।
"फल फल" गीत
मलाई सुन्तला मन पर्छ।
तिनीहरू सुन्तला र गोल छन् म तिनीहरूलाई साँच्चिकै माया गर्दछु।
तिनीहरू रसदार र मीठो र असाध्यै स्वादिष्ट छन्!
सुन्तलाहरू मेरो लागि महान हो!
केरा, केरा, केरा!
उनीहरु scrumptious र मेरो मनपर्ने छन्।
तिनीहरू धेरै बाक्लो छालाको साथ घुमेको र पहेलो छन्।
केरा मेरो लागि महान हो!
त्यहाँ धेरै प्रकारका फलहरू छन्।
केहि थोरै नाम राख्न सक्नुहुन्छ?
केरा, किविस, स्ट्रबेरी, पीच, स्याउ।
यति धेरै बिभिन्न रंग, आकार र आकारहरू।
चेरी, अंगूर, खरबूजा, नाशपाती, अनानास र अधिक!
स्ट्रबेरी साँच्चिकै स्वादिष्ट हुन्छन्।
उनीहरूले मलाई मेरो पेट खसाल्न चाहन्छन्।
तिनीहरू रातो र रसिलो र यति स्वादिष्ट छन्!
स्ट्रबेरी मेरो लागि महान हो!
अंगूर अंगूर अंगुरहरू गुच्छामा छन्!
तिनीहरू विभिन्न र colors्गमा आउँदछन्, कालो, रातो वा हरियो!
तिनीहरू धेरै साना र रुचिकर छन्, एक सजिलो खाजा!
अंगुरहरू मेरो लागि महान हो!
मलाई तरबूज मन पर्छ। यो सबैको न्यायोचित फल हो।
यो बाहिर हरियो छ र भित्र रातो।
खरबुजा मेरो लागि महान!
मलाई अनानासका टुक्राहरू मन पर्छ।
तिनीहरू स्वादिष्ट र मीठो हुन् म तिनीहरूलाई साँच्चिकै माया गर्छु।
तिनीहरू पहेँलो र अनुपम र यति स्वादिष्ट छन्!
अनानास मेरो लागि ठूलो छ!
चाहे तपाई सुपरमार्केटमा आफ्नो मनपर्ने फल खोज्न खोज्दै हुनुहुन्छ वा कुन फलफूल तपाईंलाई मनपर्दछ र के मनपर्दैन भनेर कुरा गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईंलाई अंग्रेजीमा फलहरूको नाम जान्नुपर्दछ। त्यहाँ सिक्नका लागि धेरै फलफूलहरू छन् तर यसको मतलब यो असम्भव कार्य होईन, तपाईं एकै समयमा केही सिकेर छोटो समयमा कुनै पनि फलको अंग्रेजी अर्थ सिक्न सक्नुहुनेछ।
जस्तो तपाईंलाई थाहा छ, कुनै भाषा सिक्ने, विशेष गरी अ English्ग्रेजीले आज ठूलो महत्त्व प्राप्त गरेको छ। विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग भएको अंग्रेजी यी मध्ये एक महत्त्वपूर्ण हो। शब्दहरू अ learning्ग्रेजी सिक्न सबैभन्दा ठूलो सहयोगी हुन्। अधिक शब्दहरू जुन ज्ञात छन्, अधिक वाक्यहरू गठन गर्न सकिन्छ।
अ F्ग्रेजी फलहरू ती तत्वहरू मध्येका हुन् जसले सब भन्दा ठूलो ठाउँ लिन्छन्, यद्यपि तिनीहरू अधिकांशतः महत्वहीन देखिन्छन्। किनकि दैनिक जीवनमा अंग्रेजी फलहरू बारम्बार उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि यो ज्ञात छ कि संसारमा धेरै फलहरू छन्, तिनीहरूको अ names्ग्रेजी नामहरू प्रायः ज्ञात हुँदैनन्।
यस अवस्थामा, फल नामहरू सहित वाक्य बनाउने हो भने ठूलो समस्या खडा हुन्छ। यसले फल नाम समावेश गर्ने पाठ बुझ्न पनि गाह्रो बनाउँदछ। त्यसोभए अ when्ग्रेजी सिक्दै गर्दा तपाईंले गर्नु पर्ने पहिलो चीज भनेको अंग्रेजीमा फल हो। यदि तपाईं सुरू गरीरहनु भएको छ र सूचीमा सबै फलहरूको लागि ठाउँ खोज्दै हुनुहुन्छ भने, हाम्रो टेबलमा हेर्नुहोस्।
हरेक भाषामा सही उच्चारण एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किनभने गलत उच्चारण अर्को व्यक्तिले नबुझ्न सक्छ। यस अवस्थामा, संचार हुन सक्दैन। यस कारणका लागि, तपाईं हाम्रो तालिकाबाट प्रश्नका शब्दहरू कसरी पढ्ने सिक्न सक्नुहुन्छ।
अंग्रेजी सिक्दा के विचार गर्नुपर्छ?
अंग्रेजी सिक्दा त्यहाँ धेरै गल्तीहरू छन्। गलत शिक्षाले भाषा सिक्ने प्रक्रियालाई नकरात्मक रूपमा प्रभाव पार्छ। किनभने यो गलतफर्म भएको केहि सुधार गर्न धेरै गाह्रो छ। धेरै मानिसहरू आजकल अंग्रेजी सिक्न कोर्स लिन्छन्। यस्तो व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त गर्नाले तपाईंलाई यो भाषा राम्रोसँग सिकाउँदछ। जहाँसम्म, यदि तपाईं आफैले यो सिक्ने प्रयास गर्नुभएन भने परिणामहरू प्राप्त गर्न सम्भव छैन।
यसका लागि, त्यस दिन सिकाईएको पाठहरू हरेक दिन दोहोर्याउनु पर्दछ, र व्यक्तिगत प्रयास गरिनु पर्दछ। यदि तपाईंले अरू शब्दहरूमा प्रशिक्षण छोड्नुभयो भने नतीजा एकदमै कम हुनेछ।
बच्चाहरूलाई अंग्रेजी कसरी सिकाउने?
भाषा शिक्षा प्रत्येक आयु समूह बीच भिन्न ढ .्गले गरिनु पर्छ। यदि यसमा ध्यान दिएन भने, मानिसहरूले उनीहरूले पाउने शिक्षाबाट लाभ लिन सक्ने छैनन्।
बच्चाहरूलाई अंग्रेजी सिकाउँदा, तपाईंले यसलाई अझ रमाईलो र दृश्य बनाउनु पर्छ। अधिकांश व्यक्तिहरू यहाँ भिडियोहरू र अ English्ग्रेजी कार्टुनको बारेमा सोच्दछन्। जे होस्, भिडियोको साथ सिक्ने दक्षता कम हुनेछ, किनकि बच्चाहरूको अंग्रेजी अझै सुधार भएको छैन।
किनभने भाषा सिक्ने क्रममा, बच्चाहरूले उनीहरूले देख्ने कुरा जाँच्न र जान्नुपर्दछ। यसको लागि मुख्य कारण यो हो कि बच्चाहरूले एकै समयमा उपशीर्षकहरू र भाषण पछ्याउन सक्दैनन्।
यसका लागि सिफारिश गरिन्छ कि तपाईं बच्चाहरूको लागि अ English्ग्रेजी कमिकहरू र स्टोरीबुक खरीद गर्नुहोस्। चूंकि प्रश्नमा रहेका तत्वहरू दृश्यात्मक रूपमा आधारित छन् र तिनीहरूमा अ the्ग्रेजी बराबर वस्तुहरू लेखिएका छन्, अधिक प्रभावशाली सीखने कार्य हुनेछ। उदाहरणको लागि, जब "केले" शब्द "केले" को तस्वीर मुनि देखा पर्दछ, यो तुर्की भाषामा नबताए पनि यो के हो बुझिन्छ।
यसैले, अधिक प्रभावकारी समाधानहरू प्राप्त हुनेछ किनकि बच्चाहरूको शिक्षा दृश्यहरू द्वारा समर्थित छ। जे होस्, यदि बच्चाहरू धेरै कान्छी छन् भने यो सत्य हुन्छ। समर्थन अ videos्ग्रेजी भिडियो र चलचित्रहरूबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ जबकि एक वृद्ध उमेरमा शब्दहरू याद राख्ने। यद्यपि यहाँ टर्की उपशीर्षक हुनु हुँदैन। किनकि यस अवस्थामा मस्तिष्क स्वचालित रूपमा यहाँ निर्देशित हुन्छ।
थप रूपमा, विद्यार्थीको उमेर समूहलाई विचार नगरिकन, यो दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्नुपर्दछ। साना बच्चाहरूले आफ्ना आमाबाबुसँग दैनिक शब्दावली अभ्यास गर्दा ठूलो मदत पाउन सक्दछन्। निश्चित उमेर समूहका मानिसहरूले सजिलै दैनिक पुनरावृत्तिसँग यो गर्न सक्दछन्।
किशोरलाई अंग्रेजी कसरी सिकाउने?
चित्र पुस्तकहरू दुबै सरल र उबासी तिनीहरूको लागि ध्वनि हुनेछ यदि भाषा सिक्ने युवा मानिसहरूले गर्ने हो भने। यस कारणका लागि, दक्षता प्राप्त गर्न, यो अधिक व्यावसायिक प्राथमिकतामा फर्काउन र विधि भिन्न गर्न आवश्यक छ। यसको लागि भाषा प्रशिक्षण सिफारिस गरिन्छ।
यद्यपि यो भाषा सिक्ने क्रममा सही शिक्षा प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण छ। स्कूलहरूमा पाठहरू सही र उचित रूपमा गरिनुपर्दछ, र गृहकार्य ढिलाइ नगरी पूरा गर्नुपर्दछ। अन्यथा, यदि यो फेरि गरिएको छैन भने, मुद्दाहरू बिर्सिनेछ, त्यसैले परिणामहरू कम हुनेछन्।
स्कूल बाहिर व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त गर्न र भाषा पाठ्यक्रममा भर्ना गर्नु राम्रो उपाय हो। किनभने यी संस्थाहरूमा सिकाउनेहरूले सामान्यतया उनीहरूको मातृभाषा बोल्छन्। यसैले, व्यक्तिहरू आफ्नै भाषा बोल्नेहरूबाट सीधा थप प्रभावकारी पाठ लिन सक्दछन्। अर्कोतर्फ शब्द स्मृति एक व्यावहारिक कार्य हो जुन कोहीले पनि एक्लै गर्न सक्छ।
यद्यपि व्याकरण सिक्न र वाक्यको संरचना जस्ता परिस्थितिहरूमा यस्तो अवस्था हुँदैन। किनकि यी एक्लै सिक्न सकिदैन, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त गर्न यो उचित हुन्छ।
यसको लागि पाठ्यक्रममा भर्ना हुनु अघि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिन्छ। किनभने त्यहाँ धेरै संस्था छन् जुन आज अंग्रेजी शिक्षा प्रदान गर्दछन्। जे होस्, ती सबै एक समान गुणवत्ताका छैनन्। के तपाईंलाई यहाँ सचेत हुन आवश्यक छ कुन प्रशिक्षकहरूले प्रशिक्षण, उनीहरूसँग कागजातहरू, र उनीहरू आफ्नो मातृभाषा बोल्ने गर्छन् कि प्रदान गर्छन्।
त्यसकारण तपाईले संस्थाको शिक्षा नीति जाँच गर्नुपर्नेछ। यो जानकारी तिनीहरूको साइटमा लेखिएको छ। आज, धेरै संस्था र कम्पनीहरूले आफ्नै साइटहरू मर्मत गर्छन्। यहाँ, उनी आफैं र उनीहरूले प्रदान गर्ने सेवाहरूको बारेमा विस्तृत जानकारी दिन्छ। भाषा पाठ्यक्रममा कसरी पाठ्यक्रमहरू डेलिभर गरिन्छ, कति घण्टा र पुनः प्रवेश स्थिति के हो भन्ने विषयहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्।
त्यसकारण, प्रायः भाषा संगठनहरूले यो जानकारी उनीहरूको वेबसाइटहरूमा राख्छन्। सम्भव छ सबै आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्न को लागी उनीहरुलाई जाँच गरेर र विस्तृत पढेर।
यी सबैलाई ध्यानमा राख्दै तपाईंलाई अंग्रेजी र अ fruits्ग्रेजी फलहरू राम्रोसँग सिक्न मद्दत गर्दछ। यद्यपि यो सबै होइन, जस्तो कि हामीले उल्लेख गर्यौं। यदि तपाईं आफैंले प्रयास गर्नुभएन भने यी सबै अपर्याप्त हुनेछन्।
त्यसकारण, घरमा एक्लै शब्दहरू दोहोर्याउँदा तपाईंलाई अझ बढी क्षमता प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। अंग्रेजीमा तपाईंलाई दिने फलहरू तपाईको दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने फलहरू सिक्नका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरू हुन्।